Maraykanka ayaa albaabbada u xiray xaaladaha cusub ee la ilaaliyo ee Suuriya – idalenews.com
Maraykanka ayaa albaabbada u xiray xaaladaha cusub ee la ilaaliyo ee Suuriya
Maraykanku ma bixin doono ilaalo muhaajiriin ah oo ku wajahan codsiyada cusub ee Suuriya si ay u raadsadaan xaalad ammaan ah, laakiin waxay u oggolaan doonaan kuwa horayba joogey dalka tan iyo sannadka 2016 inay joogaan, Xoghayaha Amniga Gudaha (DHS) ayaa Arbacadii ku dhawaaqay.
Xoghayaha Kirstjen M. Nielsen “go’aamiyay in colaadaha hubaysan iyo xaaladaha aan caadiga ahayn ee taageeraya magacaabista Suuriya” ee hoos imaanaya Mabaadii’da Badbaadinta Ku-meelgaarka ah (TPS) “ay sii socoto”, ayay wasaaraddu ku sheegtay hadal qoraal ah.
– Waa cad inay shuruudo ku xidhan tahay, in Siiriyamku ku salaysnaado sii socoshada, sidaas awgeed waa in la kordhiyo sharciga, ayuu yidhi Nielsen.
Qiyaastii 7,000 oo Suuriya ah oo horeyba u haystay waxay xaq u yeelan doonaan inay dib isu diiwaangaliyaan 18 bilood, laakiin saraakiisha DHS ayaa xaqiijiyay Hay’adda Anadolu oo aan la aqbali doonin codsiyada cusub.
Sarkaal ayaa sheegay in waddooyinka kale ay sii wadi doonaan kuwa soo galootiga ah ee dhowaan yimid si ay u raadsadaan xaalad qaxootinimo.
Si loo xaqijiyo muddada sanadka iyo dheellitirka, Suuriya waa in ay si joogto ah ugu noolaan jirtey Mareykanka tan iyo 1-da August 2016, waxayna si joogta ah u joogtey tan iyo Oct. 1, 2016, sida ay sheegtay wasaaraddu.
Taasi waxay keeni doontaa in dadka cusub ee soo galootiga ah aaney u qalmin muddada dheer.
Suuriya waxaa markii hore la siiyay sharci ilaalin ah sannadkii 2012 iyada oo ay socdeen iskahorimaad joogto ah oo dalka ka dhacay kaas oo ay ku dhinteen boqolaal kun oo qof waxayna ku sameeyeen burbur ballaaran oo ballaaran oo ka dhan ah Suuriya. Ilaalinta waxaa la sii kordhiyay muddadii u dhaxaysay August 2016.
Maamulka Trump ayaa horey u soo degay si loo dhammeeyo difaaca TPS ee kooxaha kale – oo ay ku jiraan Nicaragua, Haitians iyo Salvadorans – iyada oo madaxweyne Donald Trump dadaalkiisa dib u habeyn lagu sameeyo nidaamka socdaalka ee Maraykanka.
Lia Lindsey, oo ah Lataliyaha Siyaasadda ee Hawlaha Bani’aadamnimada ee Oxfam America, ayaa go’doomiyay go’aanka ugu dambeeya ee maamulka TPS, isaga oo ugu yeeray “qalad” in xildhibaannada ay tahay inay si deg deg ah wax uga qabtaan.
“Waxan ka go’anaa in aan dadkaas u soo bandhigno nabadgelyo xilligan adag. Hase yeeshee, waxay ku noqotay hantiyo muhiim u ah beelaha iyo waddankeena, “ayay ku tiri hadal ay soo saartay.” Suuriya, shaki la’aan, waxay sii ahaanaysaa mid aan ammaan ahayn oo aan degganeyn. Waxaa intaa dheer, go’aanka maamulka Trump macneheedu waxa weeye in badan oo reer Suuriya ah ee horayba jooga Maraykanka aysan awoodi doonin inay codsadaan xaaladda TPS. ”
VIDEO:-XILDHIBAANADA IYO ODEYAASHA GOBOLKA SHABEELAHA HOOSE OO QODOBO MUHIIM AH SOO SAARAY
DAAWO VIDEO XAFLAD LAGU SOO DHOWEEYNAAYEY GUD GOBOLKA BANAADIR YARIISOW OO BEERTA NABADDA KA DHACDEY